အဂတိ လိုက်စားမှု ကျူးလွန်သည့် ဝန်ထမ်းများ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်မှု များလာသဖြင့် အရေးယူရန် ဖမ်? - Yangon Media Group
အဂတိ လိုက်စားမှု ကျူးလွန်သည့် ဝန်ထမ်းများ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်မှု များလာသဖြင့် အရေးယူရန် ဖမ်?
ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်မှုများများပြားနေသည့်အတွက် အဂတိလိုက်စားမှုကျူး လွန်သော နိုင်ငံဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို အရေးယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးလျှင်ပြီးခြင်း ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခွင့်ကို တောင်းခံလာပါက ချက်ချင်းခွင့်ပြုရန်ညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရသည်။ အဂတိလိုက်စားမှုကော်မရှင်အနေဖြင့် တိုင်ကြားခံရသူများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖြင့်စစ်ဆေးချိန်မှ တရားရုံးသို့တရားစွဲဆိုတင် ပို့ချိန်အတွင်း ကြိုတင်သိရှိပြီးထွက် ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်းကြောင့် တရား ခံပြေးမှုဖြစ်စဉ်များများပြားလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း တစ်ဦးကိုတရားစွဲဆိုအရေးယူရန်နှင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုကိုခွင့်ပြုရန် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး ထံ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက် ရေးကော်မရှင်မှခွင့်ပြုချက်တောင်း ခံလာပါက အမြန်ခွင့်ပြုချက်ပေးသွား ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြား ထားကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မှ သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ညွှန်ကြားချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနအသီးသီး အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ များသိရှိစေရန် ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြား ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက် တာအောင်အောင်မင်းက ”အဲဒီညွှန်ကြားချက်က ကျွန်တော်တို့ဝန် ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းကို ညွှန်ကြား တာတော့မဟုတ်ဘူး။ တခြား ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလည်း ညွှန်ကြား ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့က ထပ် ဆင့်ဖြန့်ဝေပေးရတာ။ နိုင်ငံဝန် ထမ်းကိုအရေးယူဖို့ တရားရုံးတင် တဲ့အခါမှာ အာမခံပေးလို့ရတဲ့အ မှုရှိသလို့ ပေးလို့မရတဲ့အမှုလည်း ရှိတယ်။ ဒီလိုစစ်ဆေးချိန်ကနေ တရားရုံးတင်တဲ့အချိန်အထိကြား ထဲမှာ ကြိုသိပြီးထွက်ပြေးတာတွေ များတာကိုကာကွယ်ဖို့ ဒီလိုညွှန် ကြားလိုက်တာထင်ပါတယ်။ ကျွန် တော်သိသလောက်ကတော့ ကျွန် တော်တို့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိုအရေး ယူမယ်ဆိုရင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်း ဆောင်နေတာက ဥတ္တသီရီမှာနေ တယ်။ သူ့ကိုတရားစွဲမယ်ဆိုရင် အဲဒီနေရာမှာပဲ စွဲလို့ရတယ်။ တစ် ခြားနေရာပြောင်းလိုက်ရင် စွဲမရ တော့ဘူး။ အဲဒါကအားနည်းချက် ဖြစ်နေလို့ ဒီလိုချက်ချင်းဖမ်းဆီးစစ် ဆေးတာမျိုး လုပ်တာလို့ထင်ပါ တယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အ ဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော် မရှင်ရုံး၊ ရုံးအုပ်ထံသို့ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ”ကျွန်တော်တို့တော့ ဒီလိုညွှန်ကြားထားတာ မသိရသေး ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆီက ညွှန်ကြား တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့တင် အဲဒီကိစ္စကို လှမ်းမေးတဲ့သတင်း မီဒီယာ ခုနစ်ဦး၊ ရှစ်ဦးလောက်ရှိနေ ပါပြီ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဘာမှပြော လို့မရသေးပါဘူး”ဟု အဆိုပါ ကော်မ ရှင်မှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးလွင်ဦးက ပြောကြားသည်။ လက်ရှိတွင် အဂတိလိုက်စား မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်တာဝန် စတင်ယူစဉ်အချိန်ကတည်းက မတ်လ အထိ တိုင်ကြားစာပေါင်း ၁၈ဝဝ ကျော်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းရှိခဲ့ပြီး တိုင်ကြားခံရသည်ကိုသိရှိပြီးနောက် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသူမှာ နှစ် နှစ်အတွင်း ၁ဝ ဦးကျော်အထိရှိ ကြောင်း သိရသည်။